နှာခေါငျးပျေါမှာရှိတဲ့ ဆားဝကျခွံတှကေို ဖယျရှားဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးမြား
HomeKnowledgeနှာခေါငျးပျေါမှာရှိတဲ့ ဆားဝကျခွံတှကေို ဖယျရှားဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးမြား
H November 19, 2020
ဆားဝကျခွံတှကေ အရပွေားပျေါမှာ ပိတျဆို့နတေတျတဲ့ အရာလေးတှပေါ။ ဒါဟာ အလှနျကိုကွညျ့ရဆိုးပွီးတော့ သငျ့မကျြနှာပျေါက ထငျရှားပျေါလှငျနတေဲ့ အလှတရားတှကေို ဖကျြဆီးနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မကျြနှာပျေါမှာ ဆားဝကျခွံတှကေငျးပွီး Crush လေးကပွနျကွိုကျအောငျ ဘယျလိုဖြောကျမလဲဆိုတာ တူတူလလေ့ာကွမယျ။
၁ ။ သှားတိုကျဆေး
လိုအပျတာကတော့ သှားတိုကျဆေးနဲ့ နူးညံ့တဲ့ သှားပှတျတံလေးပါပဲ။
ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး သှားတိုကျတံပျေါမှာ သှားတိုကျဆေးတငျလိုကျပါ။ ပွီးရငျတော့ နှာခေါငျးနားလေးမှာ စကျဝိုငျးပုံစံလေးဝိုငျးထားလိုကျပွီး ၂-၃ မိနဈလောကျထားလိုကျပါ။
နောကျဆုံးအဆငျ့ကတော့ အဝတျခွောကျလေးနဲ့ သုတျခလြိုကျပါနျော။
၂ ။ မီးသှေး Mask
ဘယျလိုလုပျရမလဲဆိုတော့ ကျောရညျ လကျဖကျစားဇှနျး (၃) ဇှနျးနဲ့ မီးသှေးအမှုနျ့တို့ကို ခှကျတဈခုထဲမှာ ရောမှလေိုကျပါ။
ပွီးရငျတော့ သငျ့မကျြနှာမှာ ကပျထားလိုကျပါ။
ခွောကျသှားရငျတော့ အသာလေးခှာခလြိုကျပွီး အဝတျခွောကျလေးနဲ့ သုတျလိုကျပါ။
၃ ။ Gelatin Mask
အရငျဆုံးသငျလိုအပျတာကတော့ gelatin လကျဖကျစားဇှနျး (၂) ဇှနျးခနျ့ နဲ့ နှားနို့လကျဖကျစားဇှနျး (၂) ဇှနျး တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ဒါတှကေိုရောပွီးတော့ Microwave ထဲ ၁၀-၁၅ စက်ကနျ့လောကျ ထညျ့ထားလိုကျပါ။
ပွီးရငျ အအေးခံလိုကျပါ။ Make-up Brush နဲ့ သငျ့ရဲ့နှာခေါငျး အနီးတဈဝိုကျမှာ လိုကျပွီးပှတျသပျလိုကျပါ။
ခွောကျသှားရငျတော့ ညငျသာစှာ ခှာခလြိုကျပါ။
၄ ။ Coffee Mask
ဘာတှလေိုလဲဆိုတော့ ကျောဖီမှုနျ့အနညျးငယျ၊ ကွကျဥတဈလုံးနဲ့ Paper Towel တို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံး Coffee မှုနျ့ကို ခှကျထဲထညျ့လိုကျပါ။
ပွီးရငျ ကွကျဥကိုခှဲထညျ့ပွီး နှံ့စပျအောငျမှလေိုကျပါ။
Make-up brush လေးနဲ့ နားခေါငျးနားမှာ လိမျးလိုကျပါ။
နောကျဆုံးအဆငျ့ Paper Towel ကို ကပျလိုကျပါ။
ခွောကျသှားရငျတော့ ခှာခလြိုကျပွီး ကနျြတဲ့အကွှငျးအကနျြတှကေို အဝတျခွောကျနဲ့ သုတျနိုငျပါတယျ။
၅ ။ Banana Mask
Banana ဆိုတာနဲ့ ဘယျသူ့ကိုပွေးမွငျမိပါသလဲ? Handgel နဲ့ Skin Care တဲ့ ဆရာခွိမျ့ကိုလား။ အခုကတော့ ဆရာခွိမျ့နဲ့ မဟုတျပါဘူးနျော။ ငှကျပြောသီး အစဈနဲ့လုပျမှာပါ။ ဘာတှလေိုလဲဆိုတော့ ငှကျပြျောသီးတဈလုံး၊ ဆီ လကျဖကျစားဇှနျး (၁) ဇှနျး၊ Blender တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
ပထမဆုံး ငှကျပြျောသီးကို Blender ထဲ ထညျ့လိုကျပါ။ ပွီးရငျ ဆီရယျ၊ ကွကျဥရယျကို ထညျ့မှလေိုကျပါ။
မှပွေီးရငျတော့ မကျြနှာပျေါမှာ (၁၅) မိနဈလောကျ ကပျထားလိုကျပါ။
သငျ့မကျြနှာလေး အရငျကထကျ ပိုပွီးလှပလာတာကို တှရေ့ပါလိမျ့မယျ။
နှာခေါင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများ
ဆားဝက်ခြံတွေက အရေပြားပေါ်မှာ ပိတ်ဆို့နေတတ်တဲ့ အရာလေးတွေပါ။ ဒါဟာ အလွန်ကိုကြည့်ရဆိုးပြီးတော့ သင့်မျက်နှာပေါ်က ထင်ရှားပေါ်လွင်နေတဲ့ အလှတရားတွေကို ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျက်နှာပေါ်မှာ ဆားဝက်ခြံတွေကင်းပြီး Crush လေးကပြန်ကြိုက်အောင် ဘယ်လိုဖျောက်မလဲဆိုတာ တူတူလေ့လာကြမယ်။
၁ ။ သွားတိုက်ဆေး
လိုအပ်တာကတော့ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ နူးညံ့တဲ့ သွားပွတ်တံလေးပါပဲ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး သွားတိုက်တံပေါ်မှာ သွားတိုက်ဆေးတင်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ နှာခေါင်းနားလေးမှာ စက်ဝိုင်းပုံစံလေးဝိုင်းထားလိုက်ပြီး ၂-၃ မိနစ်လောက်ထားလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ အဝတ်ခြောက်လေးနဲ့ သုတ်ချလိုက်ပါနော်။
၂ ။ မီးသွေး Mask
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ကော်ရည် လက်ဖက်စားဇွန်း (၃) ဇွန်းနဲ့ မီးသွေးအမှုန့်တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲမှာ ရောမွှေလိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ သင့်မျက်နှာမှာ ကပ်ထားလိုက်ပါ။ ခြောက်သွားရင်တော့ အသာလေးခွာချလိုက်ပြီး အဝတ်ခြောက်လေးနဲ့ သုတ်လိုက်ပါ။
အရင်ဆုံးသင်လိုအပ်တာကတော့ gelatin လက်ဖက်စားဇွန်း (၂) ဇွန်းခန့် နဲ့ နွားနို့လက်ဖက်စားဇွန်း (၂) ဇွန်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုရောပြီးတော့ Microwave ထဲ ၁၀-၁၅ စက္ကန့်လောက် ထည့်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် အအေးခံလိုက်ပါ။ Make-up Brush နဲ့ သင့်ရဲ့နှာခေါင်း အနီးတစ်ဝိုက်မှာ လိုက်ပြီးပွတ်သပ်လိုက်ပါ။ ခြောက်သွားရင်တော့ ညင်သာစွာ ခွာချလိုက်ပါ။
ဘာတွေလိုလဲဆိုတော့ ကော်ဖီမှုန့်အနည်းငယ်၊ ကြက်ဥတစ်လုံးနဲ့ Paper Towel တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး Coffee မှုန့်ကို ခွက်ထဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကြက်ဥကိုခွဲထည့်ပြီး နှံ့စပ်အောင်မွှေလိုက်ပါ။ Make-up brush လေးနဲ့ နားခေါင်းနားမှာ လိမ်းလိုက်ပါ။ နောက်ဆုံးအဆင့် Paper Towel ကို ကပ်လိုက်ပါ။ ခြောက်သွားရင်တော့ ခွာချလိုက်ပြီး ကျန်တဲ့အကြွင်းအကျန်တွေကို အဝတ်ခြောက်နဲ့ သုတ်နိုင်ပါတယ်။
Banana ဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုပြေးမြင်မိပါသလဲ? Handgel နဲ့ Skin Care တဲ့ ဆရာခြိမ့်ကိုလား။ အခုကတော့ ဆရာခြိမ့်နဲ့ မဟုတ်ပါဘူးနော်။ ငှက်ပျောသီး အစစ်နဲ့လုပ်မှာပါ။ ဘာတွေလိုလဲဆိုတော့ ငှက်ပျော်သီးတစ်လုံး၊ ဆီ လက်ဖက်စားဇွန်း (၁) ဇွန်း၊ Blender တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး ငှက်ပျော်သီးကို Blender ထဲ ထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ဆီရယ်၊ ကြက်ဥရယ်ကို ထည့်မွှေလိုက်ပါ။ မွှေပြီးရင်တော့ မျက်နှာပေါ်မှာ (၁၅) မိနစ်လောက် ကပ်ထားလိုက်ပါ။ သင့်မျက်နှာလေး အရင်ကထက် ပိုပြီးလှပလာတာကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။